Seeking medical treatment overseas; and away from your home and family can be daunting. In addition to the travelling logistics, there is also the anxiety of what to expect and whom to reach out to while recuperating inaforeign land.
We understand this completely and hence has set up Mount Alvernia Hospital Information Centre (MAHIC) dedicated to meeting your personal need, medical or otherwise so that you will settle in peacefully and focus on your recovery.
Didirikan berdasarkan nilai-nilai Katolik oleh para Suster dari Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood (FMDM) pada tahun 1961, Rumah Sakit Mount Alvernia (MAH) merupakan rumah sakit swasta nirlaba yang menyediakan perawatan akut umum dengan 303 tempat tidur. Didukung oleh lebih dari 1.200 dokter yang telah terakreditasi dan 130 dokter spesialis di dalamnya, rumah sakit ini memiliki kapabilitas medis tersier dan dua pusat spesialis medis multidisiplin. MAH adalah satu-satunya rumah sakit swasta di Singapura yang menyediakan Perawatan Pastoral Klinis sebagai bagian dari perawatan menyeluruh untuk pasien dan keluarganya. Sejak tahun 2009, rumah sakit ini memiliki program sosialisasi komunitas aktif untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi orang tidak mampu, lansia, dan orang dengan keterbatasan gerak.
Layanan Sebelum Kedatangan dari MAHIC
Pertanyaan medis dan pengaturan perjanjian
Pengaturan Evakuasi Medis
Pengaturan akomodasi di Singapura
Pengajuan dan perpanjangan visa
Layanan penjemputan di bandara dan pemindahan
Perencanaan perjalanan dan informasi pengunjung untuk keluarga
Layanan Saat Kedatangan dari Pusat Hubungan Pasien (PLC) MAH
Pusat Hubungan Pasien MAH menyediakan layanan terpadu yang melayani pasien dalam dan luar negeri. Layanan yang disediakan adalah:
Panduan Pengenalan Rumah Sakit untuk Pasien
Pengaturan perjanjian dengan Dokter
Saran mengenai Perkiraan Biaya
Koordinasi Pendaftaran Langsung
Bantuan terkait Pengaturan Perjalanan dan Transportasi
Bantuan terkait Pemesanan Akomodasi
Pemulangan Jenazah (untuk Pasien Luar Negeri)
Pengaturan Layanan Penerjemah
Perpanjangan Izin Kunjungan Sosial
Kedokteran Geriatri (Penyakit Lansia)
Kedokteran Okupasi (Kesehatan Kerja)
Di Mount Alvernia, kami menyediakan pemeriksaan kesehatan eksekutif yang dipersonalisasi dalam lingkungan modern dan nyaman menggunakan alat penilaian terkini, seperti Penganalisis Komposisi Tubuh (menganalisis lemak tubuh di bagian tertentu selain komposisi tubuh) dan Bagan Visual resolusi tinggi (untuk tes buta warna).
Tergantung kebutuhan, Anda dapat memilih pemeriksaan dasar atau memilih dari daftar paket kami yang lengkap. Layanan pemeriksaan kesehatan kami melayani pasien individu maupun karyawan perusahaan. Tersedia pula paket pemeriksaan kesehatan korporat yang dapat disesuaikan.
Anda akan menerima laporan medis individu yang terperinci. Laporan ini akan ditinjau saat konsultasi pribadi dengan dokter Anda, yang akan menjelaskan dan menyediakan rekomendasi yang sesuai berdasarkan profil kesehatan Anda.
Pusat Informasi Mount Alvernia Hospital – Indonesia
World Trade Centre 2, Lantai 18,
Telp: 021-2939 2086
Hotline 24 jam: 08111 50 8686
Fax: 021-2939 2002
Rumah Sakit Mount Alvernia, Singapura
Telp: +65 6347 6788
Faks: +65 6254 1055
E-mail : patient.assist@mtalvernia.sg
Được thành lập vào năm 1961 dựa trên các giá trị Công Giáo do các Nữ Tu Sĩ của dòng Phan Xinh Thừa Thiên Đức Mẹ (FMDM), Bệnh viện Mount Alvernia (MAH) là một bệnh viên đa khoa tư nhân chăm sóc cấp tính không vì lợi nhuận với 303 giường bệnh. Bệnh viện được hỗ trợ bởi hơn 1.200 bác sĩ được công nhận và 130 bác sĩ chuyên khoa trong khuôn viên bệnh viện, bệnh viện đạt chất lượng tiên tiến và hai trung tâm đa khoa. MAH là bệnh viện tư nhân duy nhất tại Singapore cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Mục Vụ chuyên môn như một phần trong dịch vụ chăm sóc tổng thể dành cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Từ năm 2009, bệnh viện đã có chương trình tiếp cận cộng đồng tích cực cung cấp dịch vụ khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho những người nghèo, người cao tuổi và người khó đi lại.
Các Dịch Vụ Ban Đầu mà MAHIC cung cấp:
Giải đáp các thắc mắc về y tế và lên lịch gặp bác sĩ
Sắp xếp vận chuyển y tế
Sắp xếp nơi ăn nghỉ tại Singapore
Dịch vụ đón tiếp tại sân bay và dịch vụ chuyển tiếp
Lên kế hoạch về quá trình đi lại và thông tin về khách thăm dành cho các gia đình
Các Dịch Vụ Tiếp Đón của Trung Tâm Liên Lạc Bệnh Nhân (PLC) của MAH
Trung Tâm Liên Lạc Bệnh Nhân của MAH cung cấp dịch vụ một cửa phục vụ các bệnh nhân trong và ngoài nước. Các dịch vụ bao gồm:
Hướng dẫn về bệnh viện cho bệnh nhân
Sắp xếp các cuộc hẹn gặp với bác sĩ
Tư vấn về dự toán chi phí
Điều phối nhập viện trực tiếp
Hỗ trợ sắp xếp phương tiện vận chuyển
Đưa thi thể về nước (Bệnh nhân là người nước ngoài)
Sắp xếp dịch vụ thông dịch viên
Gia hạn hộ chiếu tạm trú
Các dịch vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng
Chụp X-Quang Chẩn Đoán
Ung Bướu Y Tế
Y Khoa Vận Động
Các Dịch Vụ Kiểm Tra Sức Khỏe:
Tại Mount Alvernia, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe cấp cao được cá nhân hóa trong môi trường hiện đại và ấm cúng bằng cách sử dụng các công cụ đánh giá mới nhất như Thiết Bị Phân Tích Kết Cấu Cơ Thể (phân tích chất béo trong cơ thể theo từng phần ngoài việc phân tích kết cấu cơ thể) và Đồ Thị Trực Quan có độ phân giải cao (để kiểm tra sự mù màu) .
Tùy thuộc vào nhu cầu của Quý vị, Quý vị có thể lựa chọn kiểm tra sức khỏe cơ bản hoặc chọn từ danh sách các gói dịch vụ toàn diện của chúng tôi. Các dịch vụ kiểm tra sức khỏe của chúng tôi phục vụ cho các cá nhân và nhân viên của các tổ chức doanh nghiệp. Chúng tôi cũng cung cấp các gói kiểm tra sức khỏe thiết kế riêng cho doanh nghiệp.
Mỗi người sẽ nhận được báo cáo chi tiết. Báo cáo này sẽ được thảo luận trong buổi tham vấn riêng với bác sĩ của Quý vị, bác sĩ sẽ giải thích và đưa ra cho Quý vị các khuyến nghị thích hợp dựa trên hồ sơ sức khỏe của Quý vị.
Bệnh viện Mount Alvernia tại Singapore
Số 820 đường Thomson, Singapore 574623
ĐT: +65 6347 6788
Fax: +65 6254 1055
电话：+65 6347 6788
传真：+65 6254 1055
ដោយ​ត្រូវបាន​ស្ថាបនា​ឡើង​ផ្អែកលើ​គុណ​តម្លៃ​កាតូលិក​​ដោយ​បងប្អូនស្រី​ដែល​មក​ពី​​បេសកជន Franciscan នៃ​ភាព​ជា​មាតា​អាទិទេព (FMDM) នៅឆ្នាំ 1961 មន្ទីរពេទ្យ Mount Alvernia (MAH) គឺ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​ឯកជន​​មិន​​សំដៅ​រក​ប្រាក់​ចំណេញ ដែលមាន​​គ្រែ​សម្រាក​​ចំនួន 303 និង​ថែទាំ​ជំងឺ​ស្រួចស្រាវ​ទូទៅ។ ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ចំនួន 1,200 រូប និង​វេជ្ជបណ្ឌិត​​ឯកទេស​ចំនួន 130 រូប​​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង មន្ទីរពេទ្យ​នេះ​មាន​​សមត្ថភាព​វេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកទី​បី និង​មណ្ឌល​អ្នក​ឯកទេស​វេជ្ជសាស្ត្រ​ពហុ​វិន័យ​ចំនួន​ពីរ។ MAH គឺជា​មន្ទីរពេទ្យ​ឯកជន​តែ​មួយគត់​នៅ​សាំងហ្កាពួរ ដែល​ផ្ដល់ជូន​នូវ​ការ​ថែទាំ​ប៉ាស្ទ័រ​តាម​បែប​គ្លីនិក (Clinical Pastoral Care) ដែល​ជា​ផ្នែក​នៃ​ការ​ថែទាំ​ទូលំទូលាយ​​ជូន​អ្នក​ជំងឺ និង​ក្រុម​គ្រួសារ​។ ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ 2009 មក មន្ទីរពេទ្យ​​មាន​កម្មវិធី​បម្រើ​សហគមន៍​សកម្ម​មួយ ដែល​ផ្ដល់​​​​ការ​ពិនិត្យ​​សុខភាព​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ជូន​ជន​ក្រខ្សត់ ជន​ចាស់ជរា និង​ជន​មិន​សូវ​ចល័ត។
សេវា​នៅ​ពេល​មកដល់​មន្ទីរពេទ្យ​ពី​មណ្ឌល​ទំនាក់ទំនង​អ្នក​ជំងឺ (PLC) របស់​មន្ទីរពេទ្យ MAH
មណ្ឌល​ទំនាក់ទំនង​អ្នក​ជំងឺ​របស់​មន្ទីរពេទ្យ MAH ផ្ដល់​ជូន​នូវ​សេវា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ ដែល​បំពេញ​តាម​បំណង​របស់​អ្នក​ជំងឺ​ក្នុង​ប្រទេស និង​ក្រៅ​ប្រទេស។ សេវា​ដែល​ផ្ដល់ជូន​រួមមាន​ដូចតទៅ៖
សម្ភព & រោគស្ត្រី
នៅ​មន្ទីរពេទ្យ Mount Alvernia យើងខ្ញុំ​ផ្ដល់​ជូន​ការ​ពិនិត្យ​សុខភាព​ប្រតិបត្តិ​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល​ក្នុង​បរិយាកាស​មួយ​ដែល​ទំនើប និង​ងាយស្រួល ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍​វាយតម្លៃ​​ថ្មី​ចុងក្រោយ​បង្អស់​ដូចជា ម៉ាស៊ីន​វិភាគ​សមាសភាគ​រាងកាយ (វិភាគ​ជាតិ​ខ្លាញ់​តាម​ផ្នែក​ក្នុង​រាងកាយ​ បន្ថែម​ពីលើ​សមាសភាគ​រាងកាយ) និង​តារាង​សោទស្សន៍​ដែល​មាន​គុណភាព​បង្ហាញ​ខ្ពស់ (ដើម្បី​ធ្វើតេស្ត​​​កែវភ្នែក​ខ្វាក់​ពណ៌)។
លោកអ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​ការ​ពិនិត្យ​សុខភាព​កម្រិត​មូលដ្ឋាន ឬ​ជ្រើសរើស​ពី​បញ្ជី​នៃ​កញ្ចប់​ទូលំទូលាយ​របស់​យើងខ្ញុំ​ទៅតាម​សេចក្ដី​ត្រូវការ​របស់​លោកអ្នក។ សេវា​ពិនិត្យ​សុខភាព​របស់​យើងខ្ញុំ បំពេញ​តាម​បំណង​របស់​បុគ្គល និង​និយោជិក​នៃអង្គភាព​សហគ្រិន។ កញ្ចប់​ពិនិត្យ​សុខភាព​សហគ្រិន​​ដែល​អាច​ប្ដូរ​តាម​បំណងផ្សេងៗ ក៏​មាន​លទ្ធភាព​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ផងដែរ។
លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​របាយការណ៍​វេជ្ជសាស្ត្រ​​​លម្អិត​ដែល​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល។ របាយការណ៍​នេះ នឹង​​ត្រូវ​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​នៅ​អំឡុង​ពេល​ប្រឹក្សា​យោបល់​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិត​របស់​លោកអ្នក ដែល​នឹង​ពន្យល់ និង​ផ្ដល់​ជូន​​លោកអ្នក​ជាមួយ​នឹង​អនុសាសន៍​មាន​ចីរភាព​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទម្រង់ជំងឺ​របស់​លោកអ្នក។
មន្ទីរពេទ្យ Alvernia Hospital សាំងហ្កាពួរ
ទូរស័ព្ទ៖ +65 6347 6788
ទូរសារ៖ +65 6254 1055
Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood (မြင့်မြတ်သော မိခင်ဘ၀ ဖရန်စစ်စကန် သာသနာပြုများ) (FMDM) မှ သီလရှင်များ၏ကက်သလစ် တန်ဖိုးပေါ်တွင် အခြေခံလျက် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် Mount Alvernia ဆေးရု (MAH) သည် အမြတ်အစွန်းအတွက် မဟုတ်သည့် ၃၀၃ ခုတင် အထွေထွေ အထူး ကုသစောင့်ရှောက်မှု ပုဂ်္ဂလိက ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးရုံနယ်မြေ၌ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ဆရာဝန် ၁၂၀၀ နှင့် အထူးကုဆရာဝန် ၁၃၀ ကျော်တို့က ပံ့ပိုးလျက် ဤဆေးရုံတွင် အဆင့်မြင့် ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ ဆေးကုသရေး ဌာန နှစ်ခုရှိသည်။ MAH သည် လူနာများနှင့် ၎င်းင်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် ရောဂါလက်္ခဏာပေါင်းစုံကို ခြုံငုံသုံးသပ်ကုသသည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် နှစ်မြှုပ်ထားသော လက်တွေ့ဆေးကုသစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ိညာဉ်ရေးရာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ပေးအပ်သည့် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ တစ်ခုတည်းသော ပုဂ်္ဂလိက ဆေးရုံဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စ၍ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် သွားလာနိုင်မှုခက်ခဲသူများအတွက် အခမဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည့် ထိရောက်သော ရပ်ရွာလူ့အဖွဲ့အစည်း အရောက် ထောက်ကူမှု အစီအစဉ်တစ်ခု ဤဆေးရုံတွင် ရှိသည်။
က မဆိုက်ရောက်မီ ကြိုတင် ဆောင်ရွက်မှုများ
ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းမှုများနှင့် ရက်ချိန်းယူခြင်း
အရေးပေါ် လူနာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစီအစဉ်
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ခြင်း
လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုဆိုခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပို့ပေးခြင်း
မိသားစုဝင်များအတွက် ခရီးသွားရန် စီစဉ်ခြင်းနှင့် ဧည့်သည် သတင်းအချက်အလက်
လူနာ ဆက်ဆံရေး ဌာန (ဏူဃ)မှ ဆိုက်ရောက်စဉ် ဆောင်ရွက်မှုများ
လူနာ ဆက်ဆံရေး ဌာနသည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြား လူနာများ၏ လိုအင်ဆန်္ဒများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် တစ်နေရာတည်းတွင် အလုံးစုံ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်သည်။
လူနာများအတွက် ဆေးရုံ လမ်းညွှန
ဆရာဝန်နှင့် ရက်ချိန်းယူရန်အတွက် စီစဉ်မှုများ
ကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်းမှု ဆိုင်ရာ အကြံပေးမှု
တိုက်ရိုက် ဆေးရုံတင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု
အရေးပေါ်လူနာများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီစဉ်မှုများ
ခရီးသွားလာရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အကူအညီ
နေရာထိုင်ခင်း ကြိုတင်မှာယူခြင်းအတွက် အကူအညီ
ကွယ်လွန်သူ ရုပ်အလောင်းကို မူရင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခြင်း (နိုင်ငံခြားသားများ)
ဘာသာပြန် ၀န်ဆောင်မှုအတွက် စီစဉ်ခြင်း
လူမှုရေးဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှု လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခြင်း
စောင့်ရှောက်သူနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ၀န်ဆောင်မှုများ
နှလုံးရောဂါနှင့် အဆုတ်ရောဂါ ခွဲစိတ်ကုဌာန
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ရောဂါကုဌာန
အတွင်း ဟိုမုန်းအကျိတ်နှင့် အရည်ထုတ်လွှတ်မှုကို လေ့လာမှုဌာန
အစာခြေစနစ်နှင့်၎င်းင်း၏ ရောဂါများ ကုသမှုဌာန
သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆေးပညာဌာန
အတွင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ရန် မလိုအပ်သည့် ရောဂါများရှာဖွေ ကုသမှုဌာန
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုဌာန
ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဆေးပညာဌာန
အားကစား ဆေးပညာ ဌာန
ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ၀န်ဆောင်မှုများ
Mount Alvernia တွင် (ကိုယ်ခန်္ဓာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအပြင် အပိုင်းလိုက်ဖြစ်သော ကိုယ်ခန်္ဓာ အဆီကို သရုပ်ခွဲသည့်) ကိုယ်ခန်္ဓာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှု သရုပ်ခွဲစက်နှင့် (အရောင်ကန်းမှု စမ်းသပ်ရန်အတွက်) အရုပ်အရည်အသွေး မြင့်မားကောင်းမွန်သည့် ရုပ်လွှာ ပုံစံကားချပ် ကဲ့သို့သော နောက်ဆုံးပေါ် ဆန်းစစ်လေ့လာသည့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုလျက် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာပြုထားသည့် အဆင့်မြင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုကို ခေတ်မီပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပေးအပ်သည်။
လူကြီးမင်း၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင် မူတည်လျက် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အခြေခံ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်သော ၀န်ဆောင်မှု အစုစာရင်းမှ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ၀န်ဆောင်မှုသည် ပုဂ်္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၀န်ထမ်းများ၏ ဆန်္ဒများကိုပါ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ အထူးသီးသန့်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့် ကုမ်္ပဏီအသင်းအဖွဲ့များ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု အစုစုကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် သီးခြားပြုလုပ်ထားသည့် ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ လူကြီးမင်း၏ ဆရာဝန်နှင့် သီးသန့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုစဉ်အတောအတွင်း ဤအစီရင်ခံစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုဆရာဝန်က လူကြီးမင်း၏ ကျန်းမာရေး ရာဇ၀င်ပေါ်တွင် အခြေခံလျက် ရှင်းပြကာ သင့်လျော်သော ထောက်ခံအကြံပြုချက်များကို ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
တယ်လီဖုန်း၊ +65 6347 6788
ဖက်စ်၊ +65 6254 1055
For Mac users, best viewed on Safari or Chrome